Falanqayn: Gudoomiye Jawaari waxaan Doonayaa awood Qaybsi! | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Falanqayn: Gudoomiye Jawaari waxaan Doonayaa awood Qaybsi!
Falanqayn: Gudoomiye Jawaari waxaan Doonayaa awood Qaybsi!
Waxaa soo baxaya in uu jiro Jah-wareer ka jira Qaabka madaxda Dawlada Faderaalka ee cusub u wada shaqeyn karto
Dhibka ugu way oo ah madaxweyne Farmaajo iyo Raysa wasaare khayre oo xilka ku helay si lama Filaan ah Waqtiga la joogo waxaa dhibka iyo jahwareerka wada Gudoomiye jawari iyo xildhibaanadii Dib loo soo Doortey Mar labaad ee horena xilka wasiirnimo soo Qabtay.
Shirar is daba jooga ah ayaa ka socda maalmahan oo dhan madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo u dhexeeya madaxda ugu saraysa Dawlada Faderaalka Gaar ahaa madaxweynaha Soomaaliya, ra’iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Shirkan waxaa keenay in la isla Fahmo habka dawladda cusub loo dhisayo iyadoo sharciga Qoranka laraacayo iyo kan xeerka siyaasadeed ee 4.5,
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa doonaya in xumumadda Raysal wasaare khayre xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inaney ka mid noqon xukumada cusub arinka oo uu diidan yahay Gudoomiye Jawaari isagoo aaminsan in Beelaha wata xubin baarlalaan inay wasiir noqoto in loo la tix galiyo beeshaas.
Arinkaa oo uu diidan yahay Madaxweyne Farmaajo. Waxaa kale Magaalada muqdisho ka socda shirbeeleed iyo kuwa siyaasadaysan oo iska soo hor jeeda.
Ujeeda dooda oo dhan waxa weeyaan siday uga mid noqon lahaayeen dawladda cusub hadii loo diidana ay u Fashilin lahaayeen dowladda cusub ee ay hogaaminayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare khayre.
Waxaa nasiid darr o ah dhaqankan xun ee Qofkii wax qaban lahaa ee kartidiisa lagu dooran lahaa inay koox dan leh ay is hor-taagto wixii dalka iyo dadka Danta ugu jirtay.
Inaan arinka Qalinka uqaato waxaa igu kalifay
Dad xog ogaal ah oo ii sheegay in madaxweynaha Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare khayre, dhibka haysato arinkaa. Dhisidda xukumad cusub oo tayo leh oo ka duwan kuwii wadanka soomaray 16 sano ee ugu Danbeeyey ee ahaa kuwii ku Fashilmay wax in wadanka cagahiisa uu markale ku israago.
Waxaa Dhawaan laga filayaa Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre, in uu qaato Go’aan geesinimo leh oo ku dhisan danta dalka iyo dadka oo aan loo eegin Shaqsidanaysta ama kooxaysiga .
Falanqeytayda ayaa ah in laga Faalloodo fikradaha Tilmaamaya dhaqanka cadaalad darada.
Waxaa ku soo gunaanadayaa Hadal kayga. waxaa loo baahan-yahay Dawlad ku dhisan Nidaam iyo cadaalad kala dambayn iyo horumar. Taas oo cid walba ay dani ugu jirto.
Markaa waxan leeyahay Raysal wasaaraha ha lagu Taageero in uu soo xusho wasiiro na gaarsiin kara arinka aan korku soo sheegay.
Qore Maxamed Caalim
Falayntan waa fikirka qoraaga
Falanqeeye siyaasada soomaaliya
Previous articleMadaxwaynihii hore ee Soomaaliya oo la dhaariyay
Next article“Il cawaran kuma fiirin doono dhibaatada abaareed ee ka taagan Bariga Afrika iyo Yemen” Madaxwaynaha Turkiga